Shiinaha soo -saareyaasha tuubada sambal -samaynta fayraska ee La -tuuri karo. Zhancheng
Tuubada sampling fayraska la tuuro
Tuubbada samaynta fayraska
Waxaa inta badan loo adeegsadaa ururinta muunadda, kaydinta, iyo gaadiidka microbes -ka faafa ee mareenka neef -mareenka, mareenka dheefshiidka, iyo muunadaha laambadda mareenka taranka. Tuubada sampling-ka fayraska ee aan firfircoonayn wuxuu ilaalin karaa asalka asalka muunadda ilaa inta ugu badan. Waxaa loo adeegsan karaa xisaabinta fayraska iyo ogaanshaha, sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa beerista fayraska iyo go'doominta.
Iyada oo ku saleysan Hank, ku darida BSA, antibiyootigyada, asiidhyada amino -ka iyo walxaha kale ee xasilinta fayraska ayaa sii wadi kara waxqabadka fayraska heerkul aad u ballaaran, yareyn kara xawaaraha kala -guurka fayraska, iyo kordhinta heerka wanaagsan ee go'doominta fayraska.
Waxa ku jira wakiil ka -hortagga fayraska, saamigu waa mid deggan muddo dheer. Muddada kaydinta waa 1 sano oo ah 2-30 ℃. Suumanka iyo tuubooyinka sambalku waxay leeyihiin tilmaamo dhammaystiran si ay ula kulmaan duruufaha adeegsiga ee kala duwan. Tuubada sampling -ku waxay leedahay shaabadayn wanaagsan, ma daadato, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
Sidoo kale OEM & ODM waxay aqbalaan codsiga macmiilka.
Uruurinta Muunad iyadoo la adeegsanayo Teknolojiyadda Dabaqa ee Daba -galka ah
Baadhitaanno ka fiican ayaa ka bilaabma shaybaarro wanaagsan, saamiyo fiicanna waxaa lagu helaa iyada oo la adeegsanayo hababka ururinta muunad habboon.
Cleanmo Flocked Swabs waxaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan. Isticmaalka caadiga ah ee Swabs Flocked waxaa loogu talagalay muunadda sanka
Dheecaannada dareeraha ah ayaa si dhakhso ah u nuugaya inta u dhexeysa fiilooyinka is -goysyada ah iyadoo la adeegsanayo ficil kaabil.
Ku wareeji suufka laba ilaa saddex jeer oo suunka ku hay 5 ilbidhiqsi si aad u hubiso nuugista ugu badan.
Haydarooliga xirmooyinka xoogga leh ee u dhexeeya xayndaabka nylon wuxuu sare u qaadaa ururinta saamiga dareeraha.
Ku dhaji suufka dhex -dhexaadka gaadiidka oo ka jebinta usha barta barafka la rinjiyeeyay.
Sample elutes si otomaatig ah oo dhaqso leh maxaa yeelay waxaa lagu hayaa meel aad ugu dhow dusha qaab dhismeed gabi ahaanba furan.
Tani ma horjoogsanayso dhaqdhaqaaqa socodka, sidaa darteed muunadda oo dhan waa la sii daayaa.
Tuubbada sampling fayraska la tuuro-A1
Waxaa loo adeegsaday ururinta muunad, gaadiid iyo kaydin, iwm.
Tuubbada sampling fayraska la tuuro-A2
Tuubbada sampling fayraska la tuuro-B1
Waxaa loo adeegsaday ururinta muunad, gaadiid, iyo kaydin, iwm, hal qof ayaa adeegsada ogaanshaha asiidhka
Tuubbada sampling fayraska la tuuro-B2
Hore: Weelka dhiiga faaruqinta ee la tuuro